Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 2:1-25
Muchato wekuKana; mvura yakava waini (1-12)
Jesu anochenesa temberi (13-22)
Jesu anoziva zviri mumwoyo memunhu (23-25)
2 Uye pazuva rechitatu, muKana kuGarireya, makaitwa mabiko emuchato, uye amai vaJesu vaivepo. 2 Jesu nevadzidzi vake vakakokwawo kumabiko acho emuchato. 3 Waini payakanga yapera, amai vaJesu vakati kwaari: “Havasisina waini.” 4 Asi Jesu akati kwavari: “Ko nyaya yacho ineiko nesu?* Nguva yangu haisati yakwana.” 5 Amai vake vakati kune vaya vaishanda: “Itai zvese zvaanokuudzai.” 6 Zvino paiva nemakate ematombo 6 ekuisira mvura sezvaidiwa nemitemo yekuzvichenesa yevaJudha,+ rimwe nerimwe richikwana zviyero* zviviri kana zvitatu. 7 Jesu akati kwavari: “Zadzai makate acho nemvura.” Saka vakaazadza kusvika pamuromo. 8 Iye akabva ati kwavari: “Cherai imwe yacho muende nayo kumutungamiriri wemabiko.” Saka vakaenda nayo. 9 Mutungamiriri wemabiko paakaravira mvura yacho yakanga yachinjwa kuva waini, asingazivi kuti yakanga yabva kupi, (kunyange zvazvo vashandi vakanga vachera mvura yacho vaiziva), akashevedza murume aichata, 10 akati kwaari: “Vamwe vese vanotanga kubudisa waini inonaka, vozobudisa isinganaki kana vanhu vadhakwa. Iwe wachengeta yakanaka yacho ukazoibudisa iye zvino.” 11 Jesu akaita izvi muKana, kuGarireya, chiri chiratidzo chake chekutanga, uye akaita kuti kubwinya kwake kubude pachena,+ vadzidzi vake vakabva vatanga kutenda maari. 12 Pashure peizvi, iye naamai vake nevanin’ina vake+ nevadzidzi vake vakadzika kuKapenaume,+ asi havana kugara ikoko mazuva mazhinji. 13 Paseka+ yevaJudha yakanga yava pedyo, uye Jesu akakwidza kuJerusarema. 14 Akawana mutemberi muine vaya vaitengesa mombe nemakwai nenjiva,+ uye vanhu vaichinja mari vari pazvigaro zvavo. 15 Saka akagadzira tyava yetambo ndokudzingira kunze kwetemberi vese vaiva nemakwai nemombe, uye akakutura mari yevaichinja mari, akapidigura tafura dzavo.+ 16 Uye akati kune vaya vaitengesa njiva: “Bvisai zvinhu izvi muno! Regai kuita imba yaBaba vangu imba yekutengesera!”*+ 17 Vadzidzi vake vakayeuka kuti zvakanyorwa kuti: “Kushingairira imba yenyu kuchandipedza.”+ 18 Saka vaJudha vakabva vati kwaari: “Ungatipa chiratidzo chei,+ sezvo uri kuita zvinhu izvi?” 19 Jesu akavapindura kuti: “Putsai temberi iyi, ndiimise mumazuva matatu.”+ 20 VaJudha vakabva vati: “Temberi ino yakatora makore 46 ichivakwa, iwe woti uchaimisa mumazuva matatu?” 21 Asi iye aitaura nezvetemberi yemuviri wake.+ 22 Asi paakamutswa kuvakafa, vadzidzi vake vakayeuka kuti aigara achitaura izvi,+ uye vakatenda rugwaro rwacho nezvakanga zvataurwa naJesu. 23 Asi paaiva muJerusarema pamutambo wePaseka, vanhu vakawanda vakatenda muzita rake pavakaona zviratidzo zvaaiita. 24 Asi Jesu akanga asingavimbi navo nekuti aivaziva vese 25 uye akanga asingafaniri kuita zvekuudzwa zvakaita munhu, nekuti aiziva zviri mumwoyo memunhu.+
^ ChiGir., “Zvinei neni uye newe, mukadzi.” Iri idimikira rinoreva kuramba zvataurwa. Kushandisa kwaakaita shoko rekuti “mukadzi” hakurevi kuti akanga asingaremekedzi.
^ Chiyero chacho rinofanira kunge raiva bhati, iro rakanga rakaenzana nemarita 22. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Kana kuti “musika.”